Sheet simbi nhema basa - OUZHAN DZAISHANDISWA (SHANGHAI) CO., LTD
Sheet simbi kugadzira Service-OEM China Sheet simbi Zvikamu Mugadziri
Kutenda kune gumi nevanoziva mainjiniya uye anopfuura makumi matatu seti yezvigadzirwa zvemberi, Ouzhan yakanaka pakuziva-mune pepa simbi indasitiri kwemakore gumi nemashanu. Ouzhan inokubatsira kuchenesa chigadzirwa chako dhizaini kuburikidza neDFM uye inovimbisa kuti yako sheet simbi zvikamu zvinogona kugadzirwa nenzira kwayo, zvinobudirira, uye nehunhu hunoenderana neako maratidziro. Isu tinotenda zvakasimba mukugadzira mhando jig yekumwaya kuti igadzirise mu-maitiro ekudzora. Yedu ERP inotigonesa kubata mukati-imba kugadzirwa kwezvakapedzwa zvigadzirwa nemaSKU mazhinji.
Chigadzirwa chedu chakaomesesa chakagadzirwa kusvika zvino chakagadzirwa nezvikamu mazana matatu nemakumi matatu. Isu tine masimba akasimba ekugadzira akaomesesa, epamusoro chaiyo sheet sheet simbi zvikamu. Yedu ina mitsara yegungano inokwanisa kutsigira yechipiri uye yekupedzisa maitiro akadai sekumwaya, riveting, poda kupfeka, anodizing, uye gungano. Isu tiri zvakare vanokwanisa kupa sub-gungano sevhisi kana kuendesa akapedza zvigadzirwa.
Ouzhan Precision Sheet Metal Kugadziridza Kugona:
OuZhan anokwanisa kupa mutengo-unobudirira wakasarudzika jira simbi yekunyepedzera masevhisi uye yakakwira chaiyo mhando zvigadzirwa kune yakakura huwandu hwemapurojekiti.
-Une hunyanzvi hwakagadziriswa pepa simbi yekugadzira masevhisi epakati kusvika pakakwirira vhoriyamu mirairo
- Wide hwakawanda hwekusarudza simbi zvinhu.
- Hwakasiyana-siyana hwamachina mukobvu (0.5mm-20mm).
- Multiple rinovira yemhando yepamusoro michina uye yemhando kudzora system.
- Unyanzvi uye hwakasiyana sekondari kugadzira tekinoroji.
- Yakasimba kugadzirwa uye nekukurumidza kutumira nguva.
Nei Uchisarudza Ouzhan Sheet Metal Inoshambadza Services
1. Hi-Tech Kugadzira Midziyo
• Laser Kucheka CO2 uye N2
• CNC Sheet Bending 4 & 6 Sekaiichi
• TIG, MIG, tsikwa
Robot Welding (ABB Robot 1410 ine Fronius Welding System)
• Yakagadzirwa-Yakagadzirwa Jig
• Welding Notching
2. Akawanda Sekondari Maitiro Kugona
Kuwedzera kune jira simbi machine, isu dzidzira muTIG uye MIG, Robhoti Welding, Spot Welding, CNC Sheet Bending, Riveting, PEM, Laser Etching, nezvimwewo.
3. Simba R & D Simba
Isu tine mainjiniya gumi munzvimbo yedu yeR&D, vese vari vanachiremba kana mapurofesa kubva kuYunivhesiti yeSainzi neTekinoroji yeChina. Tinogona kupa yakanyanya nyanzvi jira simbi dhizaini uye jira simbi yekugadzirisa masevhisi.
4. Yakaomarara Hunhu Kudzora (ISO 9001: 2008)
Tine hunyanzvi hwehunhu hwekuongorora vashandi uye zvigadzirwa, zvinoenderana neyepasi rose zviyero kune zvigadzirwa zvako kuti uedze, uye ubudise yakadzama bvunzo mushumo wevatengi 'jira simbi zvikamu.
5. OEM & ODM inogamuchirwa
Yakagadziriswa saizi uye maumbirwo aripo. Tinokugamuchirai kuti mugovane mifananidzo yenyu yesimbi yesimbi nesu, ngatishandei pamwechete kuti hupenyu huwedzere kugadzira.
Chii Chinonzi Sheet Metal Kushanda & Sei Iyo Kuumbwa Kwe Sheet Metal Kunoshanda
Sheet simbi haisi chaiyo zvinhu. Asi, izwi iri rinoshandiswa kune simbi dzakaumbwa kuita chimiro. Kazhinji, jira simbi ine rectangular chimiro. Izvo zvakare zvine hunhu kuti ukobvu hweshiti hwakanyanya pazasi peiyo yehurefu uye upamhi.
Pamusoro pesimbi, zvimwe zvakawanda simbi senge mhangura, aluminium uye goridhe pamwe nealumsiu maalloys anogona kugadziriswa kuita sheet simbi. Kuti igadziriswe kuita simbi, zvisinei, izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvinofanirwa kuve nehunhu chaihwo, kureva kuomarara uye kuomarara, uyezve kuve ductile, kureva kuumbika. Izvi zvinodikanwa zvinoguma nezvirambidzo maererano nezvinhu zvinogona kushandiswa. Nekudaro, hazvigoneke kugadzirisa zvakapusa kana zvakaomarara zvakanyanya kuita jira simbi.
Zvinoenderana neizvi, jira simbi chigadzirwa chakapedziswa chinogona kugadzirwa pamusoro penzvimbo hombe, umo machira ari akareruka, akaonda, akatsiga, akasimba uye akapfava. Nekuda kweizvi zvakasarudzika, ivo vanokodzera kune ese marudzi emicheka uye yekufukidza. Uye zvakare, jira simbi inogona kuremara munzira dzakawanda, kureva kuti inogona kuvezwa, kukotama, kurohwa nezvibhakera kana kucheka. Maumbirwo akasiyana siyana anogona kugadzirwa kubva kune jira simbi, ndosaka ichishandiswa senge yekutanga zvinhu zvemhando dzakasiyana dzezvigadzirwa.
Izwi rekuti "jira simbi kugadzira" rinofukidza yakawanda nhamba yekugadzira maitiro. Chaizvoizvo, izwi jira simbi kushanda rinoreva kugadzirwa kwezvigadzirwa, zvikamu uye zvikamu zvakagadzirwa nesimbi. Kuwedzera pakutema, kucheka uye kukotama, maitiro eishizha simbi kugadzira anosanganisirawo kurova, kuumba, kuumburuka uye kujoina. Sheet simbi yekuumba inowanzo kuverengerwa mune jira simbi kugadzirisa, iine anotevera madiki subcategories:
• Kuvakwa kwesimbi
• rukoko achiumba
• Kuchenesa coil
• Kukotama kubaya
• Laser kucheka
• Kugadziriswa kweLaser
Mukati megadziriro yesimbi yekugadzirisa simbi, ese ari maviri akapfava uye asingagadzirike machira anogona kugadzirwa, ayo akasiyana maitiro anowanikwa neakasiyana maalloys. Semuenzaniso, pane zvinhu zvakawanda zvinogona kuwedzerwa kune simbi munzvimbo yemvura panguva yekushanda kwesimbi uye inotarisisa zvinhu zveshizha resimbi rakagadzirwa. Mukuwedzera kune silicon, nickel uye chromium, izvi zvinhu zvakare zvinosanganisira titanium, mhangura, niobium uye molybdenum.
Sheet simbi yekugadzirisa Zvinhu - Zvishandiso Zvinoshandiswa kune Sheet Metal machine
Zvinhu zviripo zveSheet Metal machine
• Aluminium 5052H
• Aluminium T5, T6
Cold Yakakungurutsirwa Simbi (CRS, SAPH440)
• Yakapetwa Simbi (HRS)
• Stainless Simbi (SS304, SS316, SS301)
Zvikumbiro zveCCC Turning Services uye Zvikamu
Ouzhan Sheet Simbi Kugadzira Kumusoro Kunopedzisa
Heano sarudzo yakasarudzika yesimbi pamusoro yekupedzisa masevhisi pane yako sarudzo yemashini simbi simbi zvikamu kuti uvandudze kutaridzika kwezvikamu, kumeso kutsetseka, kuramba ngura, uye mamwe maitiro:
① Seyakagadzirwa (yakajairwa): ~ 125 RA µin (3.2 RA µm). Minor turu mamaki anozoonekwa pachikamu.
Mo Smoothed: Zvikamu zvakagadzirwa pane yakaderera feed chiyero kuitira kuti uwane pamusoro pekuomarara kwe ~ 62.5 RA µin (1.6 RA µm). Surface hukasha hunogona kudzikiswa kusvika ~ 32 RA µin (0.8RAµm) pachikumbiro.
③ Bead Yakaputika: Bead blasting inowedzera yunifomu matte kana satin pamusoro pekupedzisira pane chakagadzirwa chikamu, kubvisa ese maturu mamaki. Inonyanya kushandiswa kwekushongedza zvinangwa.
④ Anodized Yakajeka kana Ruvara: Anodizing inowedzera yakatetepa, yakaoma, isiri-inoitisa ceramic kupfeka pamusoro penzvimbo dzealuminium, ichiwedzera ngura yavo uye vanopfeka kuramba. Inowanikwa mune akasiyana mavara.
⑤ Anodized Hardcoat: Hardcoat anodizing inogadzira mukobvu weceramic kupfeka unopa yakanakisa ngura uye kupfeka kuramba. yezvinhu zvinoshanda.
⑥ Upfu Hwakaputirwa: Hupfu hwekupfeka hunowedzera hutete hutete hwakasimba, kupfeka uye ngura inodzivirira inodzivirira polymer pendi pamusoro pechikamu. Inowanikwa mune yakakura yakakura mavara.
⑦ Electropolished: Electropolishing inzira yemagetsi inoshandiswa kupolisha, kupfuudza uye kudonhedza simbi zvikamu. Izvo zvinobatsira kudzora pamusoro pehusimbe.
⑧ Nhema oxide: Nhema oxide kupfeka kwekushandura kunoshandiswa kugadzirisa kudzora ngura uye kudzikisira mwenje.
⑨ Chromate kutendeuka kupfeka (Alodine / Chemfilm): Chromate kutendeuka kupfeka kunoshandiswa kuwedzera kurwisa kurwisa kwesimbi alloys nepo ichichengetedza yavo conductive zvivakwa.
Ush Brushing: Brushing inogadzirwa nekukorobha simbi ne grit zvichikonzera unidirectional satin kupera.